10 Ebube LGBT Enyi na Enyi | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Ebube LGBT Enyi na Enyi
(Emelitere ikpeazụ On: 14/05/2021)
Ma ị bụ Diva, ejiji, kwụọ, nwoke nwere mmasị nwoke, nwanyị nwere mmasị nwanyị, ma ọ bụ adịghị njikere maka nkọwa nke onwe, ndị a 10 egwu LGBT aga-esonye ma na-eme ememe gị. Site na isusu ọnụ na Paris gaa oriri dika kpakpando kpakpando na Berlin, ndị a ịtụnanya European obodo niile bụ ihe banyere ihe hà ikike, nganga, na ịhụnanya na agba niile nke egwurugwu.
1. Ebube LGBT-Enyi na Enyi N’uwa: Berlin
Ihe a malitere site na ntọala nke nzukọ nwoke na nwanyị nwere mmasị nwanyị na ụwa. 1897 bụ afọ akara akara nke mbụ Mgbanwe nke Berlin na isi mmekọ nwoke na nwoke nke ụwa.
Mma na ịhụnanya na-abịa n’ụdị nile, na agba, na mmekọahụ. Berlin bụ otu n'ime ndị kacha anabata ihe, imeghe, na-anabata obodo ndị dị n’ụwa. Berlin bụ ihe ịtụnanya LGBT ebe na Europe na-anabata ụdị ịhụnanya niile. taa, berlin bụ ebe kachasị LGBT, mana ọ nwetawo ya ewu ewu naanị na narị afọ nke 20, otú super nnukwu ụzọ obodo mere.
Nollendorfplatz na Schoneberg bụ obi na mkpụrụ obi ọhịa nke ama egwuregwu mmekọ nwoke na nwoke na Berlin. Ebe a, ị nwere ike ịga oriri na nkwari, nke gi, ọṅụṅụ, ma nwee obi uto na ndu LGBT.
Oge kachasị mma iji nweta LGBT extravaganza bụ oge ọkọchị, na The Epic CSD Berlin. Fọrọ nke nta 1 nde mmadụ na ọtụtụ narị mma floats ike otu n'ime ndị kasị mpako parades na ụwa, maka ikike nha anya na nnwere onwe ịhụ n'anya na agba niile nke egwurugwu.
Ihe kacha mma ime
Gaa na nwoke nwere mmasị nwoke Schwules ngosi nka, ihe ncheta mbụ nke mmegharị nwoke na nwanyị, mmanya Marietta a ma ama, Cafe Berio, nke kasị ochie Heile Welt gay club, ma ọ bụ maka nnọkọ ntụrụndụ kacha mma na KitKat-Klub.
2. Ebube LGBT na-aga Netherlands: Amsterdam
Mgbe ị bụ obodo izizi mba ụwa kwadoro alụm di na nwunye, ị bụkwa otu n'ime ebe kachasị egwu na LGBT n'ụwa. Ya mere, fun na ịtụnanya Amsterdam bụ obodo mbụ na Europe iji kwado ndị Gay Games na 1998 na Amsterdam nganga Nme na-atụle otu nke kasị mma n'ụwa.
Ọ bụrụ na ị maghị ebe kụrụ na obodo, mgbe ahụ kwụsị na na Pink Point, ebe maka ozi gbasara LGBT- enyi na enyi tụrụ na Amsterdam. Amsterdam nwere egwu ọnọdụ abalị, ma tupu anyanwụ adaa, ị kwesịrị ị na-agagharị n'okporo ámá ndị ọzọ na ebe ndị ọzọ, ebe LGBT na-eku ume ma na-agbapụ: Reguliersdwarsstraat, akụkọ ihe mere eme Kerkstraat, Amstel, wee gaa Zeedijk na Warmoesstraat maka ọmarịcha ndụ abalị LGBT na Amsterdam.
Chọpụta aha ọjọọ adọkpụrụ na Queen’s Head, inu ke mmanya na Getto, nweta mmụọ nsọ na ụlọ ahịa LGTB nke Amsterdam, ihe ebere, na nnọkọ oriri na ọ theụ theụ na Taboo ma ọ bụ Exit na n'okporo ámá Reguliersdwarsstraat. Na mgbakwunye, na Amsterdam kanaal nganga bụ otu n'ime ihe ndị kasị pụrụ iche mpako parades ileta na ụwa.
3. Ebe kachasị mma LGBT na UK: Brighton
Ebe ọ bụ na Brighton nke 1930 abụwo ebe nchekwa maka onye ọ bụla chọrọ ịchọpụta mmekọahụ ha. Otu obodo dị n'akụkụ oke osimiri abụrụla ebe LGBT na-eme enyi na UK, dị nso ma ọ dị anya site na isi obodo.
Agbata obi Kemp Town bụ mpaghara LGBT na Brighton, ekele ya boutique hotels, pubs, na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ .ụ. Ebe a, ị ga-ahụ vibes dị ịtụnanya, oyi ikuku ebe ị pụrụ usọrọ ịhụnanya na ụdị nile. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ iso ụzọ gị niile n'obi, mgbe ahụ Brighton nwere ọtụtụ ebe agbamakwụkwọ dị ka Royal Pavilion, ma site ebe ahụ malite mmemme na Charles Street ma ọ bụ osimiri Brighton.
Nwee pint na nwoke nwere mmasị nwoke Bulldog pub, ma buru ụzọ zuru ike na The Brighton Sauna, ma mechaa abalị na-abọ ọbọ, ụlọ oriri na ọ nightụ nightụ abalị LGBT kacha elu.
4. Obodo di egwu LGBT Enyi na Germany: Cologne
Obodo nwere ọtụtụ ụlọ mmanya karịa ndị mmadụ, na ihe mpako karịa ihe ọ bụla ọzọ, Cologne bụ otu n'ime egwu kachasị na LGBTQ-enyi na enyi na Europe. Cologne dị ezigbo enyi LGBT na ọ nwere njem Gaily nke ya, ya mere ị nwere ike ịchọpụta ihe nzuzo nzuzo kachasị mma nke obodo maka ekpomeekpo ọ bụla na agba egwurugwu.
Na mgbakwunye, Cologne bụ ebe kachasị LGBT, n'ihi na o nwere 2 nwoke nwere mmasị nwoke, ee nke ahụ bụ eziokwu. The ochie Heumarkt-Mathiasstrasse na mepere emepe Bermuda Triangle maka ndị na-eto eto. N'ebe ọdịda anyanwụ, oriri na nkwari kacha mma na klọb ịgba egwu ga-eme ka ahụ gị na ọwụwa anyanwụ maa jijiji maka ebe ndị mara mma na ebe ezumike ọdịnala.
Enweghị oge ịga leta ha abụọ? Enweghị nchekasị! N'ihi na ụgbọ okporo ígwè S-Bahn, i nwere ike ịga njem azụ na-apụta dị ka ọtụtụ ugboro dị ka ị chọrọ na ibu-ngwa-ngwa.
Echefula Cologne's Christopher Street Day, ụwa a ma ama Cologne Mpako n'ezie. Na mgbakwunye, Ahịa Ekeresimesi nke Cologne, na ejị na February. Maka nnọkọ oriri na ọ checkụ checkụ lelee Deck 5 ma ọ bụ Amadeus.
5. Ebube LGBT Enyi na Enyi na France: Paris
Obodo kachasị nwee ịhụnanya na ụwa na-eme ịhụnanya oge ọ bụla kwa ụbọchị, na ị na-kasị nabatara usọrọ ịhụnanya gị na niile na agba nke egwurugwu. Jupụta nke glam, ịke, klaasị, na fun, Paris bụ otu n'ime LGBT kachasị egwu- enyi na enyi aga n'ụwa.
Marais mara mma bụ etiti nwoke na nwanyị nwere mmasị nwanyị na Paris, ya na ebe ndi LGBT a ma ama di na ebe a ma ama Ebe de la Bastille, Ogige Republic, na nkwari akụ de Ville. Kemgbe afọ, site na Jenụwarị ruo Julaị, enwere ihe ịtụnanya emere nye ndị LGBT: ememme, nka, film, na n'ezie nganga Nme. Ebe a, ị ga-enwe ọ homeụ n'ụlọ, ma nwee ọtụtụ ụzọ iji chọpụta ndị LGBT French ma chọpụta Paris.
Raidd Barn maka ndị na-agba egwu na ịgba egwu sexy, Debonair cafe dị n'elu ụlọ Cite de la Mode et du Design maka macaroon na echiche dị ịtụnanya banyere Seine, na Badaboum bistro na mpaghara Bastille maka ndị ọhụụ ọhụụ ọhụụ na ndị ọhụụ nke France, ma susuo ya na Eiffel Tower na ndabere.
6. Obodo LGBT Enyi na Enyi na Austria: Vienna
Akụkọ banyere ọdịnala Austrian bara ọgaranya juputara na akụkọ banyere ndị eze nwere mmasị nwoke, ya mere ịbụ LGBT- enyi na enyi bụ akụkụ nke obodo a mara mma DNA. Ya mere, sịkwa ihe mere na na Vienna ị nwere ike ịga n’ihu 2 Njem ndị nwoke na nwanyị nwere mmasị nwoke iji chọpụta akụkọ ihe mere eme nke ndị LGBT na ndụ. Na mgbakwunye, yiri nke ọzọ LGTB enyi na enyi ebe na anyị ndepụta, enwere ihe omume LGTB karịa ka ị nwere ike ịgụta n'ime afọ.
Otu n'ime ihe omume LGBT pụrụ iche nke afọ bụ Bọọlụ egwurugwu. Hotel Schonbrunn na-akwado nnukwu bọọlụ a, ebe ị nwere ike ịgba egwu Waltz ma gosipụta ụdị ejiji gị nke ejiji na uwe mwụda dị ịtụnanya na tuxedos.
Detuo kọfị Viennese na Cafe Savoy, otu na Miss Candy na Heaven Vienna club, kwuo M Dos na ọnọdụ Alpine dị ịtụnanya, ma were foto agbamakwụkwọ gị mgbe ọmarịcha ihe owuwu obodo ahụ gbara gị gburugburu.
7. Obodo LGBT Enyi na Enyi Na Ireland: Dublin
Ikekwe Ireland maara ọtụtụ dị ka ndị siri ike, okpukpe, na oyi kpọnwụrụ na oge. Otú ọ dị, na ọ bụghị otú ahụ na Dublin dị egwu, fun, na LGBT- enyi na enyi. na 2015, alụmdi na nwunye nwoke nwere mmasị nwoke ghọrọ iwu, ihe dị ịtụnanya na mgbanwe Ireland ka ọ bụrụ onye na-emesapụ aka, na imeghe mba.
N'ihi ya, ị ga-ahụ Dublin ihe ịtụnanya LGBT ọzọ- enyi na enyi na-aga Amsterdam na berlin. June bu onwa mpako na Dublin, mana i kwesịkwara lelee Ememe Dublọ ihe nkiri International Dublin Gay, kasị ukwuu n'ụwa.
Achịcha mmanya ma ọ bụ oriri na George Bar, ulo akwukwo ndi gay na Dublin, PantiBar, Calọ Cafe, na-egwugharị, ma ọ bụ sauna nwere mmasị nwoke iji zuru ike bụ ihe kachasị mkpa iji mee iji nwee obi ụtọ na obodo LGTBQ dị ịtụnanya na Dublin.
8. Ebube LGBT Enyi na Enyi: Belgium
Ghent na Brussels na-mara dị ka 2 kasị dị egwu LGBT-enyi na enyi aga na Belgium. Obodo a bụ nke abụọ nye iwu ka nwoke na nwoke na nwoke ma ọ bụ nwanyị na nwanyị na-enwe mmekọahụ. Na Brussels, Rue du Marche au Charbon bụ etiti nke ọnọdụ LGBT.
Ọmụmaatụ, na Rainlọ Egwurugwu, ị pụrụ ịnụ ụtọ Lesborama nkiri ememme, art ngosi, na ọtụtụ omenala ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị chọrọ igosi ihe mama okike nyere gị, mgbe ahụ Chez Maman nabatara divas na agba niile na ihe na-egbu maramara nke egwurugwu.
9. Egwu LGBTQ enyi na enyi ebe: London
Ọdịda Anyanwụ, pubs, ije, eze-nwanyị. London bụ akara ngosi abụghị naanị n'ihi ndị eze, mana n'ihi na ọ bụ ebe dị egwu LGBT na Europe. Obodo a bu microcosmos nye uwa, nke pụtara obodo na-anabata ndị si n'akụkụ niile nke ụwa, dịkwa oke ọkụ na enyi na nwanyị, nwanyị nwere mmasị nwanyị, kwụọ, ma ọ bụ transgender.
Nanị ụlọ ahịa, dị ịtụnanya elu ụlọ Ogwe, nkiri, na egwu, London’s nwetara ọtụtụ ebe na-akpali akpali iji nwee ọmarịcha ndụ LGBT kachasị mma na ọdịbendị.
Ya mere, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnụ ụtọ LGTB kachasị mma na London, gaba na Dlastone Superstore maka cabaret kachasị mma. Maka ebe kachasị mma, Glory pub dị mma, ma hụ na ị kwụsịrị site na ụlọ ahịa akwụkwọ LGBT kacha ochie na England, Nwoke nwere mmasị nwoke Okwu ahụ.
10. Nnukwu ebe enyi na enyi LGBT: Milan
N'adịghị ka obodo ndị LGBT ndị ọzọ nwere omume enyi na ndepụta anyị, Enweghi ikike LGBT na Milan. Otú o sina dị, ejiji na njiri mara nma n'uwa na-etu onodu nzuzu ma dikwa agha na eme LGTBQ film festival.
Mgbe na Milan, agbataobi Porta Venezia bụ obi nke ndụ na ọdịbendị LGBT. Na Lecco na San Martini n'okporo ámá, ị ga-ahụ ogwe osisi na klọb mara mma mara mma.
Ọ dị mfe ịzụ ụgbọ ala na Europe na site na Save A Train mana ọ naghị adị mfe mgbe nile ịchọta ebe dị egwu LGBT-enyi na enyi, ya mere nke a mere anyi jiri dee blog nke a maka gi.
You chọrọ Embed anyị blog post “10 Egwu LGBT enyi na enyi aga” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fawesome-lgbt-friendly-destinations%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
nwoke nwere mmasị nwoke nwanyị nwere mmasị nwanyị NKP LGBTdabara ebeurourope LGBT enyi na enyi Ebe nrụọrụ LGBTF Friendly LGBTQ NgangaParadeEurope